Fikirkan 24-iyo 32-inji ah ee loo yaqaan 'iMac' oo loo qaabeeyey xuduud la'aan ayaa ugu fiican | Waxaan ka socdaa mac
Fikraddan 24-inji ah iyo 32-inji ah ee loo yaqaan 'iMac' oo loo qaabeeyey xudduud la'aan waa tan ugu fiican
Waxaan leenahay suurtagalnimada iyo rajada in bisha Nofeembar 10, Apple ay munaasabadda ku soo bandhigi doonto kombuyuutarro cusub oo ay la socoto Apple Silicon. Xanta ayaa tilmaamaysa taas waxaan arki karnaa seddex nooc oo ah MacBook laakiin sidoo kale waxaa jiray hadal ah qaab iMac ah. Waxa ay sidoo kale yiraahdeen ayaa ah in la filayo inaysan jiri doonin wax isbedel bilic leh sidaa darteedna kaliya lagu daro processor-ka cusub sidii ugub. Laakiin fikraddan loo yaqaan 'iMac' ee loo qaabeeyey iyadoon xuduudo lahayn ayaa si fudud u muuqata.
Habka iMac ee dib loo rogay lama filayo inuu ka soo muuqdo dhacdada toddobaadka soo socda. Haa laga bilaabo MacBook inkasta oo iyadoon wax isbeddel ahi ka dhicin dibedda. IMac-kani ma imaan doono oo keliya Apple Silicon, laakiin sidoo kale waxaan ku arki lahayn muuqaal dhammaystiran oo cusbooneysiiyay. Sababtaas awgeed, waxaa jira kuwa aan waqti ku lumin ogeysiisyadan iyo in kasta oo uusan jirin taariikh rasmi ah oo lagu sii daynayo, xitaa ma ahan inay run tahay, ku dhiirrato inay samaystaan ​​nashqado iyaga u gaar ah.
Markan waxaan soo bandhigeynaa fikradda loo yaqaan 'iMac' oo loo qaabeeyey xuduud la'aan iyo laba cabbir leh. Mid ka mid ah 24 inji iyo mid 32 inji ah. Mid kasta oo iyaga ka mid ah wuxuu umuuqdaa mid weyn, laakiin cabirka weyn markasta wuu fiicnaan doonaa. Fikradda iMac-kan waxaa sameeyay Svetapple waxayna ku saleysan tahay saadaasha falanqeeyaha Apple Ming-Chi Kuo. Dhowr jeer ayuu sheegay in Apple ay soo saareyso iMac oo leh naqshad cusub oo 24-inji ah iyo bezels ka yar.
Moodooyinka waxay u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan isla markaana og inay horey u heystaan ​​processor-rada cusub ee Apple Silicon ee gudaha ku jira, waa dalab weyn oo loogu talagalay iibsadayaasha mustaqbalka. Naqshadeynta waa mid cajiib ah waxaan rajeyneynaa in kastoo aysan isku mid ahayn, haddana ay u egtahay fikraddan cusub ee iMac.
Waxay u egtahay inaan haysano ipad aad u weyn indhahayaga hortooda waana wax cajiib ah. Fikradan loo yaqaan 'iMac' oo loo qaabeeyey xudduud la'aan ayaa ka farxin doonta dhammaan taageerayaasha cayaaraha iyo filimada. Waxay imaan laheyd midkoodna rinji uma uusan dhigin Apple TV iyo baahintiisa 4K.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Fikraddan 24-inji ah iyo 32-inji ah ee loo yaqaan 'iMac' oo loo qaabeeyey xudduud la'aan waa tan ugu fiican
Telegram Lite waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo hawlo xiiso leh